Tokony handresy tahaka ny nandresen'i Kristy
"Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao." - Jao. 16:33.
Famelezana mafimafy kokoa noho ny mbola hataony amintsika, no nataon'i Satana tamin'i Kristy. Fatiantoka lehibe no efa teo anatrehany na i Kristy na izy no ho mpandresy. Raha nanohitra ny fakam-panahy mahery vaika indrindra nalefany i Kristy ary tsy vitan'i Satana ny nitarika Azy hanota, dia fantany fa tsy maintsy ho very ny heriny ary hofaizina amin'ny fandravana maharitra mandrakizay izy amin'ny farany. Noho izany, dia niasa mafy tamin-kery lehibe i Satana mba hitarihana an'i Kristy hanao fahadisoana, ka dia handresy Azy izy (...) Tsy halaim-panahy amin'ny fomba feno fikirizana sy tsy mifaditrovana tahaka izay natao tamin'ny Mpamonjintsika ianao. Teo amin'ny lalany mandrakariva i Satana. — Y1, 01 Aprily 1873.
Moa ve ny olona hifikitra amin'ny herin'Andriamanitra, ka hanohitra an'i Satana amin'ny finiavana sy ny faharetana, tahaka ny nanomezan'i Kristy ohatra ho azy teo amin'ny tolona nataony tamin'ny fahavalo tany an'efitry ny fakam-panahy? Tsy afaka hamonjy ny olona amin'ny herin'ny hafetsen'i Satana Andriamanitra raha tsy sitrapon'ilay olona izany. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny hery maha-olombelona azy izy ary ampian'ny herin'i Kristy avy amin'Andriamanitra mba hahazoana manohitra sy mandresy na ahoana na ahoana. Raha fehezina, dia tsy maintsy mandresy tahaka ny nandresen'i Kristy ny olona. Amin'ny alalan'ilay fandresena, izay tombontsoa ho azy ny nahazo izany tamin'ny anarana mahagagan'i Jesôsy, dia afaka ny ho tonga mpandovan'Andriamanitra izy, ary mpiara-mandova amin'i Jesôsy Kristy. Tsy ho tanteraka izany raha i Kristy irery no nitolona teo amin'ny fahazoana ny fandresena. Tsy maintsy manao ny anjarany ny olona, tsy maintsy mpandresy noho ny aminy amin'ny alalan'ny hery sy ny fahasoavana nomen'i Kristy azy izy. Tsy maintsy miara-miasa amin'i Kristy ny olona eo amin'ny asa mafy atao mba hahazoana ny fandresena, ka amin'izany no hahatonga azy ho mpiombona anjara amin'ny voninahitr'i Kristy. — TFC 4:32,33.
Nandresy ny Mpamonjy mba hampisehoana amin'ny olona ny fomba mety hahazoany izany fandresena izany ihany koa. Notoherin'i Kristy tamin'ny Tenin'Andriamanitra avokoa ny fakam-panahin' i Satana rehetra. Tamin'ny fitokisany tamin'ireo teny fikasan'Andriamanitra no nandraisany hery hankatò ny didin'Andriamanitra, ka dia tsy nahita tombony ny mpaka fanahy. MH, 181.